अष्ट्रेलियाबाट नेपाली उद्दार गरेको विमानले बोक्यो कार्गो, जुलाई २९ को उडानमा चलखेलको संभावना « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Australia » अष्ट्रेलियाबाट नेपाली उद्दार गरेको विमानले बोक्यो कार्गो, जुलाई २९ को उडानमा चलखेलको संभावना
अष्ट्रेलियाबाट नेपाली उद्दार गरेको विमानले बोक्यो कार्गो, जुलाई २९ को उडानमा चलखेलको संभावना
Saral Gurung Published On : 28 July, 2020
जुलाई १४ मा अष्ट्रेलियाबाट नेपालीको उद्दार गर्न उडेको सेमि चाटर्ड विमानले कार्गो पनि बोकेको भेटिएको छ ।
सिंगापुरबाट काठमाडौका लागि गरिएको चाटर्ड उडानमा यात्रु बाहेक ८ सय ९१ किलो कार्गो पनि लगिएको भेटिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलले जुलाई १५ मा जारी गरेको विज्ञप्तीका अनुसार सिल्क एयरको उक्त विमानले काठमाडौबाट सिंगापुर फर्कने बेलामा समेत ५ हजार ८ सय २३ किलो कार्गो बोकेको देखिन्छ ।
गत जुलाई १४ मा सिड्नी, मेलवर्न र ब्रिजवेनबाट सिल्क एयरको नियमित उडानबाट १ सय ४९ जना नेपाली सिंगापुर गएका थिए । उनीहरुलाई त्यहाबाट बोइङ ७३७ विमान चाटर्ड गरेर काठमाडौ लगिएको हो ।
चाटर्ड विमानमा चाटर्ड गर्ने पक्षको जानकारी बिनै विमानले कसरी कार्गो लग्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजदूतावासकाे पहलमा गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेलकाे संयाेजनमा बनेकाे उद्दार समितिकाे निर्णय अनुसार नेपाल र अष्ट्रेलियाका ६ वटा ट्राभल एजेन्सी मिलेर सिंगापुर एयरको विमान चाटर्ड गरिएको हो । समितिमा अष्ट्रेलियाका नेपाली संस्थाहरुकाे छाता संगठन फेन्का, चिकित्सकहरुकाे संस्था एम्डा, पत्रकारहरुकाे संस्था एन्जा पनि सदस्य छन् ।
नेपाल र अष्ट्रेलियाका ६ वटा ट्राभल एजेन्सीलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएपनि टिकट काट्ने काम भने सिड्नीको एभरेष्ट ट्राभल्सलाई दिइएको थियो । विमानको व्यवस्थापन गरेबापत २५ डलर सेवाशुल्क सबै ट्राभल एजेन्सीलाई बराबर बाड्ने सहमति भएको थियो । सिंगापुर एयरबाट भएको सेमी चाटर्ड उडानको प्रतिव्यक्ति भाडा ११५१ अमेरिकी डलर थियो ।
कार्गो किन बोकियो ?
यात्रु बोक्न चार्टड गरिएको विमानमा कार्गो लगिएको बारे सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपालट्युबले गरेको खोजीमा सम्झौता अनुसार नै विमानले कार्गो बोकेको भेटिएको छ ।
विमान चाटर्ड गर्न सिंगापुर एयरलाइन्स र सिड्नीस्थित एभरेष्ट ट्राभल एजेन्सीबिच भएको सम्झौता अनुसार विमानको बोक्ने क्षमता २० हजार किलो छ । त्यो मध्ये विमानले १३ हजार किलो बोक्ने क्ष्ँमता मात्रै ट्राभल एजेन्सीलाइ चाटर्ड गरेको हो । सम्झौता अनुसार १३ हजार किलोभित्र १२ बिजवेन र १४१ इकोनोमि तर्फका यात्रु र उनीहरुको ३० किलोसम्मको लजेग बोक्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौताको ८ औं बुदाको १ र २ खण्डमा बाकी रहेको ७ हजार किलो क्षमता चाहि विमान कम्पनी आफैले कार्गोका लागि प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । सम्झौता यस्तो छ
सम्झौताको सेड्युल खण्डमा सिंगापुरबाट जादा यात्रु बोक्ने र काठमाडौबाट फर्कदा फेरि अर्थात यात्रु रहित फर्कने भन्ने पनि सम्झौता छ । फेरि भनेको यात्रु बोक्न नपाउने तर कार्गो चाहि बोक्न पाउने भन्ने रहेको एभरेष्ट ट्राभलका इर्साद अहमदले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता अनुसार नै विमानले आफ्नो कार्गो बोकेकाले यसमा ट्राभल एजेन्सी र गैरआवासिय नेपाली संघ प्रति प्रश्न उठाउन नहुने अहमदले बताउनुभयो ।
जुलाई ३० को उडानमा चलखेलको संभावना
जुलाई ३० मा सिड्नीबाट नेपालीको उद्दार गर्न हुन लागेको चार्टड विमानमा कार्गो बारे केही उल्लेख छैन । नेपाल ट्युबलाई प्राप्त मालिण्डो विमान र चार्टड गर्ने सुमघ ट्राभलबिच भएको गोप्य सम्झौतामा कार्गो बारे केही उल्लेख नै छैन । ६ पृष्ठ लामो सम्झौतामा यात्रु संख्या उल्लेख भएपनि विमानको बोक्ने क्षमता कति हो ? कति किलो चाटर्ड भएको हो ? र बाकी रहेको बोक्ने क्षमता कसले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने महत्वपुर्ण विषय नै उल्लेख छैन । यसबारे आफु पनि स्पष्ट नभएको गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कडेलले बताउनुभयो । यसबारे ट्राभल एजेन्सी र विमान कम्पनीसंग बुझ्ने उहाको भनाई छ ।
सुमेघ ट्राभलले विमान कम्पनीसंग भएको सम्झौता एनआरएनए र दूतावासलाई दिएपनि विमानको क्षमता र चार्टड क्षमता जस्तो महत्वपुर्ण विवरण हुने सेड्युल भने दिएको छैन । यदि विमान कम्पनीले आफुले कार्गो प्रयोग नगरि ट्राभललाई दिने तथा मेलेसियाबाट सिड्नी आउदा र काठमाडौबाट मेलसिया फर्कदा यात्रु बोक्न पाउने सम्झौता छ भने ट्राभल एजेन्सीले थप आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । मालिण्डाे एयरकाे वेस मलेसियादेखि सिड्नीहुदै काठमाडाै पुगेर मलेसिया फर्किदासम्म विमान चाटर्ड गरिएकाे हाे । त्यसबिचमा यात्रु बाहेक के के बाेक्ने भन्ने स्पष्ट सम्झाैता हुनुपर्ने जनकारहरु बताउछन् । तर, त्यसबिचमा सिड्नीबाट जादा यात्रु बाेक्ने तय भएपनि, मलेसियाबाट सिड्नी आउदा र काठमाडाैबाट मलेसिया फर्कदा के के बाेक्ने भन्ने नखुलेका कारण चाटर्ड गर्ने ट्राभल एजेन्सीले उक्त रुटमा कार्गाे र यात्रु बाेकेर लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिएकाे हाे ।त्यसाे त सुमेघले कान्तिपुर होलिडे ट्राभल एजेन्सी माफर्त जुलाई ३० मा काठमाडौबाट सिड्नी जानका लागि मालिण्डो एयर चार्टड गरिएको भन्दै टिकट बिक्रीको सुचना फेसबुकमा पोष्ट गरिरहेको छ । जुलाई ३०बिहान ६ बजे सिड्नीबाट उड्ने उक्त विमान त्यहि दिन काठमाडाै पुग्ने हुनाले त्यहि बिमानमा यात्रु बाेकेर मलेसिया फर्कने गरि टिकट बेच्न लागेकाे हुन सक्छ ।
सिड्नीबाटै चाटर्ड भएर आउने मालिण्डो विमानमै काठमाडौबाट सिड्नी यात्रु लाने तयारी भएकोले टिकट बिक्रीको सुचना राखिएको कान्पिुर होलिडे ट्राभलका अष्ट्रेलिया प्रतिनिधी ध्रुब कडेलले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म ३ सय जना भन्दा बढीले सिड्नी आउने टिकटबारे चासो देखाएर इमेल गरेको उहाँको भनाई थियो । नेपालबाट यात्रु बाेक्न सुमेघले नेपाल सरकारसग अनुमति लिने प्रयास समेत गरिरहेकाे छ । कान्तिपुर होलिडेले ८ सय डलर भाडा तोकेर फेसबुकमा राखेको विज्ञापन यस्तो छ
यसबारे नेपालमा रहेका सुमेघ ट्राभलका संचालक सुमेघ केसीलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफु व्यस्त रहेको भन्दै जवाफ दिनुभएन ।
यदि त्यहि विमानमा यात्रु मलेसियासम्म आउने तथा कार्गो पनि ट्राभल एजेन्सीले नै प्रयोग गर्ने हो भने सिड्नीबाट काठमाडौ जाने यात्रुको भाडा पनि काम हुनुपर्ने धेरैको बुझाई छ । यसबारे विमान चाटर्डको संयोजन गरिरहेको दूतावास र एनआरएन दुबै बेखर छन् । विमान व्यवस्थापन गर्न दूतावासको तर्फबाट सहभागी अधिकारी यादव कोइरालाले आफुलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । यदि कार्गो र फर्कदा यात्रु बोक्ने हो भने भाडा सस्तो हुनुपर्ने यहा“को भनाई थियो । त्यस्तै एनआरएनए अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता नन्द गुरुङ पनि यदि यो सत्य हो भने भाडा घटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । जुलाई ३० मा सिड्नीबाट काठमाडौको भाडा ११२० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । photo- Malido Air